खराब सपना देख्नुको कारण यस्ता छन् र रोकथाम गर्ने तरिकाहरु यति सजिला - यादका टुक्रा
खराब सपना देख्नुको कारण यस्ता छन् र रोकथाम गर्ने तरिकाहरु यति सजिला
पहेँलो चामल : सुत्नुअघि आफ्नो सिरानीमुनि पहेँलो चामल राखौं । सेतो चामलमा बेसार दलेर पनि पहेँलो बनाउन सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा तपाईं डरलाग्दो सपनाबाट मुक्ती पाइनेछ । सुकुमेलको पोको : राति सुत्नुअघि एउटा कपडामा सुकुमेल बाँधेर त्यसलाई आफ्नो सिरानीमुनि राखौ । वास्तुका अनुसार यसो गर्दा राति मिठो निद्रा पर्नेछ र सपना पनि राम्रो देखिनेछ ।
तामाको भाँडोमा पानी : कहिलेकाहीँ डरलाग्दो सपना नदेखे तापनि तपाईं निद्रामा आत्तिदै उठिन्छ । यदि तपाईंलाई पनि यस्तो हुन्छ भने एउटा तामाको भाँडोमा पानी भरेर आफ्नो खाटको मुनि राखौं । बिहान उठेपछि त्यो पानीलाई गमलामा हाल्नुपर्छ । जुत्ता चप्पल नराख्नुस : कतिपयले राति सुत्दा आफ्नो जुत्ता-चप्पल खाटमुनि नै राख्छन् । यदि तपाईंको पनि यस्तो बानी छ भने तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । जुत्ता वा चप्पल ओछ्यानमुनि राख्दा पनि खराब सपनाहरु देखिन्छन् भन्ने वास्तुको मान्यता छ ।
ओछ्यान सफा गरेर सुतौं : यदि राम्ररी ओछ्यान सफा नगरिकन सुतिएको छ भने पनि खराब सपनाको शिकार बन्न सकिन्छ । त्यसैले सुत्नुभन्दा अगाडि ओछ्यान राम्ररी मिलाउनुपर्छ । साथै सुत्नुअघि गोडा धुने बानी गर्नुपर्छ । गाढा रंगको ओढ्ने : यदि तपाईं गाढा रंगको ओढ्ने ओढेर सुत्ने गरिएको छ भने त्यसलाई पनि बदल्नुपर्छ । राति डरलाग्दो सपना देख्नुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ । कपाल बाँधेर सुत्नु हुँदैन : महिलाहरुले राति कपाल बाँधेर सुत्नु हुँदैन । राति कपाल खुल्ला छोडेर सुत्नाले मिठो निद्रा लाग्ने र राम्रो सपना देखिने विश्वास छ ।
Don't Miss it गाईको किन पुजा गरिन्छ भन्ने जवाफ दिन पनि यो पढ्न पर्छ, गौरवको कुरा हो
Up Next अनि बद्लिन्छ श्रीमानको व्यवहार, परिवारका लागि ख्याल गर्नै पर्छ यो
गाईको किन पुजा गरिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नेहरुले यो पढ्न पर्छ,
तिहारमा गौ पूजाको विशेष महत्व छ । हिन्दू धर्ममा गाईलाई आमा मानिएको छ । संसारको सबैभन्दा प्राचीन धर्मले एउटा सामान्य…
सुखी र सफल हुनका लागि भगवान श्रीकृष्णका १० उपदेशहरु
वास्तवमै भगवान श्रीकृष्ण थिए वा त्यो कुनै चरित्रको रचना गरिएको थियो ? यसमा अनेकन तर्क छन् । यद्यपी सबैले स्विकारेको…
कृष्णको स्वरुपको अर्थ के हो ?, किन बोक्छन् मुरली र शंख ?
भगवान श्रीकृष्णको बारेमा अनेक किस्सा छन् । १६ सय गोपिनीसँग प्रेमिल सम्बन्ध गाँस्ने श्रीकृष्णको अति गरिब सुदमासँग घनिष्ठ मित्रता थियो…
रावणको एक गल्ती र शिवको एक चतुरताले गर्दा गोकर्णमा स्थापित भएको शिवलिंग
प्रसंग राम-रावणको युद्धबाट सुरु हुन्छ । यो त्रेतायुगको कुरा हो । युद्धमा रामलाई पराजित गर्नका लागि रावणले भगवान शिवको तपस्या…
1 month ago 963 Views
मृत्युपछि पुनर्जन्म लिन्छौ कि, सबै अस्तित्व लोप हुन्छ ?,
पृथ्वीमा जन्मने हरेकको मनमा उठ्ने साझा प्रश्न हो यो । जन्मपछि मृत्यु हुन्छ नै । तर, मृत्युपछि के हुन्छ ?…
1 month ago 1664 Views
यी खानेकुराका बियाँहरु वास्तै नगरी फ्याल्ने हो भने मुर्ख हुम् हामी
कति फलका बियाँखानमा प्रयोग हुँदैन। फल खान्छौ, बियाँ खादैनौ । केहि यस्ता फल छन्, जसको बियाँ निकै उपयोगी हुन्छ, खासगरी…
जान्नुहोस हनुमान चालिस सिरानीमा राखेर सुत्नुका फाइदाहरु
रातिको समयमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ । व्यस्त जीवनशैली, तनाव, मोबाइल लगायतका उपकरणका कारण राति निन्द्रा नपर्ने…
ब्लाइन्ड डेट : जोखिमपुर्ण हुन्छ तर यति ध्यान पुर्याए बन्छ रोमाञ्चक
अनलाइन डेटिङ वेबसाइट, सोसल मीडिया र च्याटिङ एप्सको माध्यमबाट आज अधिकांश युवाहरु एक-अर्कासंग जोडिएका छन् । अहिले युवाहरुमा इन्टरनेटको पहुंँच…